आज चन्द्रग्रहण लाग्दै, कुन राशीलाई कस्तो? – Everest Dainik – News from Nepal
आज चन्द्रग्रहण लाग्दै, कुन राशीलाई कस्तो?
काठमाडौं, असार ३१ । आज राती चन्द्रग्रहण लाग्ने भएको छ । यसवर्ष अषाढ मसान्तको पूर्णिमाका दिन गुरु पूर्णिमाका दिन चन्द्र ग्रहण लाग्ने भएको हो । नेपाल, भारतका साथै अष्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकामा देखिने यो ग्रहण नेपालमा भने राती एक बजेर ४५ मिनेटमा शुरु हुनेछ । यसको मोक्ष भने बिहान ४ बजेर ४५ मिनेटमा हुनेछ ।
चन्द्र ग्रहणको सूतक ग्रहण शुरु हुनभन्दा ९ घण्टा अघि नै शुरु हुन्छ । सूर्य ग्रहणको सूतक १२ घण्टा अघि शुरु हुन्छ । त्यसैले भोली चन्द्र ग्रहणको सूतक दिउँसो १।४५ बजेबाट शुरु भएर पर्सी बिहान ४ बजेर ४६ मिनेटसम्म रहनेछ । यो सामग्री तपाई एभरेष्टदैनिक डटकममा पढ्दै हुनुहुन्छ ।
ट्याग्स: Chandra Grahan